စငျကာပူ ဘနျကာရနေံလုပျငနျး Hin Leong ဘဏျမြားအား အကွှေး အမရေိကနျ‌ဒျေါလာ ၃ ဘီလြံတငျ - Logistics Guide
စငျကာပူမှ ရနေံနှငျ့ ရနေံထှကျပစ်စညျး ရောငျးဝယျရေးလုပျငနျး Hin Leong Trading သညျ ဘဏျမြားတှငျ
စုစုပေါငျး အမရေိကနျဒျေါလာ ၃ ဘီလြံဝနျးကငျြ အကွှေးတငျနသေဖွငျ့ မညျသို့ ဖွရှေငျးပေးမညျကို ဘဏျမြားနှငျ့ ဆှေးနှေးနပွေီး မပေးဆပျနိုငျမညျကို စိုးရိမျရသညျ့ အခွအေနတှေငျ ရှိနသေညျ။
ကွှေးကိစ်စတှငျ အနညျးဆုံး ဘဏျလုပျငနျး ၁၀ ခု ပါဝငျပတျသကျနရော၌ျ HSBC Holdings, DBS Group Holdings နှငျ့ OCBC Bank တို့ ပါဝငျသညျ။
HSBC Holdings သညျ ပမာဏာအမြားဆုံးဖွဈပွီး အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၆၀၀ ဝနျးကငျြ ရှိသညျ။
ရနေံဈေးမြား ထိုးကပြွီး ဈေးအနိမျ့တှငျ ဆကျရှိနခွေငျးကွောငျ့ Hin Leong Trading သညျ ငှမေလညျတော့ဘဲ အကပျြအတညျး ကွုံနရေသညျဟု ဆိုသညျ။ အခြို့ဘဏျမြားက Hin Leong Trading ကို letters of credit အသဈ ထုတျပေးခွငျး မပွုကွတော့ခြေ။ အကွောငျးမှာ ကာလတို အကွှေးကို ပွနျပေးနိုငျမညျဆိုသညျမှာ မသခြောသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ L/C ဟု အတိုကောကျ ချေါဝျေါကွသညျ့ letters of credit သညျ ဝယျယူသူကိုယျစား ဘဏျက ကွားဝငျပွီး အာမခံခကျြ ပေးသညျ့စာ ဖွဈသညျ။ ဝယျယူသညျ့ ကုနျစညျမြား လကျခံရရှိသညျ့အခါ ဘဏျက ရောငျးသူကို ဝယျယူကိုယျစား ငှပေေးခလြေိုကျသညျ။ ထိုသို့ ဘဏျက စိုကျထုတျထားသညျ့ အကွှေးကို ဝယျယူသူက ပေးခရြေသညျ။ ယခုလို ငှအေကပျြအတညျး ဖွဈနခြေိနျတှငျ ဘဏျအနဖွေငျ့ ကွားဝငျပွီး အာမခံခကျြပေးရနျ ငွငျးဆနျသညျ။
Hin Leong Trading ကို တရုတျလူမြိုး ကိုယျဒူးကိုယျခြှနျ တိုငျကှနျး ဖွဈလာသူ Lim Oon Kuin က ထူထောငျလုပျကိုငျသညျ။ ၁၉၆၃ ခုနှဈတှငျ ကုမ်ပဏီကို ထူထောငျခဲ့သညျ။ ရကွေောငျးသှားလာ သင်ျဘောမြားသို့ လောငျစာဆီပေးသှငျးသညျ့ ဘနျကာလုပျငနျးမြားတှငျ အကွီးမားဆုံး လုပျငနျးအဖွဈသို့ ရောကျရှိသညျ။
Lim Oon Kuin သညျ ကိုယျပိုငျ ထရပျကားတဈစီးဖွငျ့ အရောငျးအဝယျလုပျငနျးကို စတငျခဲု့ပွီး ကွီးပှားသှားခဲ့ရာ ရနေံတငျသင်ျဘောလကျတံဖွဈသော Ocean Tankers (Pte.) Ltd. သညျ သင်ျဘော အစီး ၁၃၀ ပိုငျဆိုငျသညျ့လုပျငနျးအဖွဈသို့ ရောကျရှိသညျ။ ရနေံရောငျးဝယျရေးအတှကျ ဆီတငျဆီခြ ဆိပျခံမြား၊ ပိုကျလိုငျးမြား၊ လှောငျကနျမြား ပိုငျဆိုငျသညျ။ သင်ျဘောမြားကို လောငျစာဆီအမြိုးမြိုးနှငျ့ ခြောဆီ အမြိုးမြိုးတို့ ပေးသှငျးသညျ။ ယငျး၏ ဘနျကာလကျတံတဈခု ဖွဈသော Ocean Bunkering Services သညျ စငျကာပူတှငျ တတိယအကွီးမားဆုံး သင်ျဘောလောငျစာဆီ ဘနျကာလုပျငနျး ဖွဈသညျ။
စင်ကာပူ ဘန်ကာရေနံလုပ်ငန်း Hin Leong ဘဏ်များအား အကြွေး အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၃ ဘီလျံတင်
စင်ကာပူမှ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း Hin Leong Trading သည် ဘဏ်များတွင် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလျံဝန်းကျင် အကြွေးတင်နေသဖြင့် မည်သို့ ဖြေရှင်းပေးမည်ကို ဘဏ်များနှင့် ဆွေးနွေးနေပြီး မပေးဆပ်နိုင်မည်ကို စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။
ကြွေးကိစ္စတွင် အနည်းဆုံး ဘဏ်လုပ်ငန်း ၁၀ ခု ပါဝင်ပတ်သက်နေရာ၌် HSBC Holdings, DBS Group Holdings နှင့် OCBC Bank တို့ ပါဝင်သည်။
HSBC Holdings သည် ပမာဏာအများဆုံးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ဝန်းကျင် ရှိသည်။
ရေနံဈေးများ ထိုးကျပြီး ဈေးအနိမ့်တွင် ဆက်ရှိနေခြင်းကြောင့် Hin Leong Trading သည် ငွေမလည်တော့ဘဲ အကျပ်အတည်း ကြုံနေရသည်ဟု ဆိုသည်။ အချို့ဘဏ်များက Hin Leong Trading ကို letters of credit အသစ် ထုတ်ပေးခြင်း မပြုကြတော့ချေ။ အကြောင်းမှာ ကာလတို အကြွေးကို ပြန်ပေးနိုင်မည်ဆိုသည်မှာ မသေချာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ L/C ဟု အတိုကောက် ခေါ်ဝေါ်ကြသည့် letters of credit သည် ဝယ်ယူသူကိုယ်စား ဘဏ်က ကြားဝင်ပြီး အာမခံချက် ပေးသည့်စာ ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူသည့် ကုန်စည်များ လက်ခံရရှိသည့်အခါ ဘဏ်က ရောင်းသူကို ဝယ်ယူကိုယ်စား ငွေပေးချေလိုက်သည်။ ထိုသို့ ဘဏ်က စိုက်ထုတ်ထားသည့် အကြွေးကို ဝယ်ယူသူက ပေးချေရသည်။ ယခုလို ငွေအကျပ်အတည်း ဖြစ်နေချိန်တွင် ဘဏ်အနေဖြင့် ကြားဝင်ပြီး အာမခံချက်ပေးရန် ငြင်းဆန်သည်။
Hin Leong Trading ကို တရုတ်လူမျိုး ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန် တိုင်ကွန်း ဖြစ်လာသူ Lim Oon Kuin က ထူထောင်လုပ်ကိုင်သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ရေကြောင်းသွားလာ သင်္ဘောများသို့ လောင်စာဆီပေးသွင်းသည့် ဘန်ကာလုပ်ငန်းများတွင် အကြီးမားဆုံး လုပ်ငန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသည်။
Lim Oon Kuin သည် ကိုယ်ပိုင် ထရပ်ကားတစ်စီးဖြင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲု့ပြီး ကြီးပွားသွားခဲ့ရာ ရေနံတင်သင်္ဘောလက်တံဖြစ်သော Ocean Tankers (Pte.) Ltd. သည် သင်္ဘော အစီး ၁၃၀ ပိုင်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသည်။ ရေနံရောင်းဝယ်ရေးအတွက် ဆီတင်ဆီချ ဆိပ်ခံများ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ လှောင်ကန်များ ပိုင်ဆိုင်သည်။ သင်္ဘောများကို လောင်စာဆီအမျိုးမျိုးနှင့် ချောဆီ အမျိုးမျိုးတို့ ပေးသွင်းသည်။ ယင်း၏ ဘန်ကာလက်တံတစ်ခု ဖြစ်သော Ocean Bunkering Services သည် စင်ကာပူတွင် တတိယအကြီးမားဆုံး သင်္ဘောလောင်စာဆီ ဘန်ကာလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။